ယွန်းဘတ်ရဲ့ အာဆင်နယ်နည်းပြဘဝ ပွဲဦးထွက်မှာ ဘာတွေလုပ်ပြသွားမလဲ ??? – Myan Ball
ယွန်းဘတ်ရဲ့ အာဆင်နယ်နည်းပြဘဝ ပွဲဦးထွက်မှာ ဘာတွေလုပ်ပြသွားမလဲ ???
ယူရိုပါလိဂ်မှာ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ စိတ်ပျက်စရာရလဒ်နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး ဒီပွဲမှာလည်း အများကြီး ပြောင်းလဲဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး ….
အူနိုင်းအမ်မရီကို ထုတ်ပယ်ပြီးနောက်ပိုင်း ယွန်းဘတ်ကို ယာယီနည်းပြအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းမှာ ဘယ်လို အပြောင်းအလဲတွေကို မြင်တွေ့ရမလဲ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ နော့ဝစ်ချ် ကွင်းလယ်က ကန့်ဝဲလ် ခြေကျင်းဝတ်ဒဏ်ရာရှိနေပြီး ဂျာမယ်လ်လူးဝစ် ဒဏ်ရာက ပြန်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မိသားစု ကိစ္စရှိနေတဲ့ အဲလက်စ်တက်တေးနဲ့ ဂရန့်ဟန်လေတို့လည်း ဒီပွဲကို လွဲချော်မှာပါ။ အာဆင်နယ် နည်းပြ ယွန်းဘတ်အနေနဲ့ နောက်တန်းက ဒေးဗစ်လုဇ်၊ မူစတာဖီတို့ရဲ့ ဒဏ်ရာအခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီး ဘယ်လာရင် ပါဝင်နိုင်ဖို့ မသေချာပေမယ့် ကိုလာဆီနက် ကြံ့ခိုင်မှု ပြည့်ဝလာပါပြီ။
ဖရန့်ဖတ်အသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ ၁-၂ ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက် အူနိုင်းအမ်မရီနဲ့ အာဆင်နယ်တို့ရဲ့ လမ်းခွဲကို သိပ်ကြာကြာ မစောင့်လိုက်ရပါဘူး။ အာဆင်နယ်အသင်းက နောက်ဆုံး (၇) ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီး အာစင်ဝင်းဂါးလက်ထက် အသင်းရဲ့ ပွဲပေါင်း (၁၂၀၀) ကျော်မှာတောင် ဒါမျိုး မမြင်ခဲ့ရပါဘူး။ နော့ဝစ်ချ်က ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်မှာ အဝေးကွင်းသွားပြီး အဲဗာတန်အသင်းကို ဂိုးပြတ်အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ အသင်းပါ။ ဒါပေမယ့် အိမ်ကွင်း နောက်ဆုံး (၃) ပွဲဆက်တိုက် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး (၁၀) ဂိုးအထိ ပေးခဲ့ရပါတယ်။
ဒီပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ နော့ဝစ်ချ် နည်းပြ ဒန်နီယဲယ်ဖာကီက “နည်းပြနဲ့ အသင်းကြား ဆက်ဆံရေး ရပ်တန့်သွားတယ်ဆိုပေမယ့် အာဆင်နယ်အသင်းက အခုချိန်အထိ ထိပ်တန်း ကစားသမားတွေနဲ့ အသင်းကောင်း တစ်သင်း ဖြစ်နေဆဲပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာ ရလဒ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရမ်း စိတ်ဓာတ်ကျနေမှာ မဟုတ်သလို အဲဗာတန်ကို အနိုင်ရခဲ့လို့လည်း အရမ်းကြီး ဝံ့ကြွားနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က ပွဲတိုင်း ပွဲတိုင်းမှာ အောက်အသင်း တစ်သင်း အဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် အာဆင်နယ်လို အသင်းမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်ချိန်မှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အနိုင်ရဖို့တော့ အမြဲတမ်း အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။” လို့ ဆိုပါတယ်။
အာဆင်နယ် နည်းပြချုပ် ယွန်းဘတ်ကလည်း “ကျွန်တော် အရာအားလုံးကို အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် ကာလအတော်ကြာ ပေးဆပ်ခဲ့ပြီး အခုချိန်မှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ မျက်နှာပေါ် အပြုံးပန်းတွေ ဝေအောင် ပြန်လုပ်ပေးသွားပါမယ်။” ဆိုပြီး ပြောကြားခဲ့သေးတာပါ။ ဒီပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ လော်ရိုးက “ယူရိုပါလိဂ်မှာ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ စိတ်ပျက်စရာရလဒ်နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး ဒီပွဲမှာလည်း အများကြီး ပြောင်းလဲဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နော့ဝစ်ချ် ၁-၁ အာဆင်နယ်ပါ။” ဆိုပြီး သုံးသပ် ခန့်မှန်းပေးသွားခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ပွဲဆက်အောင်ထားတဲ့ မော်ရင်ဟိုကို ယုံရမလား၊ ပုံစံကောင်းပျောက်နေတဲ့ ဘုန်းမောက်ဘက်ကပဲ အရဲစွန့်ရမလား ကူညီပေးမယ့် ပွဲကြိုအထောက်အကူပြု အချက်အလက်များ